mpamatsy ginger sy ozinina - Mpanamboatra sakamalao any Sina
fanondranana legioma sy tongolo gasy vaovao ambongadiny amidy
Tombony: madio, tsy misy bibikely bibikely, tsy misy residu ny bibikely, mavo ny lokony, vatana be volo, ambony kalitao avo indrindra, tsiro tena izy, sakafo ara-pahasalamana, faritra malama, mavo anatiny sy mavo any ivelany, mety haondrana eran'izao tontolo izao mafana be izy ary misy fiantraikany amin'ny fihenan'ny bakteria, mitazona ny vatana salama tsara, ny fiainana talantalana dia lava sy amin'ny tontolo mety, afaka mitahiry mandritra ny telo taona isika dia manana zavamaniry fanodinana manokana hamokarana sakamalao, fanasana, fanaovana poloney, fitehirizana, fonosana ...
Sanda mahavelona: ny sakamalao vaovao dia misy fihenan'ny fihenan'ny sterilization, ny sakamalao ao anaty ny sakamalao ao anaty vatana, izany dia afaka mamokatra anzima manohitra ny otrikaina, manana fahaiza-manao matanjaka hiatrehana ireo radika oksizenina izy, nefa koa mandaitra kokoa noho ny vitamina E. , miteraka ivon-toerana vasomotor sy fientanam-po mampihetsi-po reflexe firaisana ara-nofo, mampiroborobo ny lalan-dra, mampitombo ny fiasan'ny vavony, mankarary vavony, tsemboka, vokany antipyretika. Jiang koa dia manatsara ny tsiambaratelon'ny juic gastric ...
kalitao avo lenta Shandong vaovao sakamalao miloko mavo tanora
Endri-javatra: Toerana madio, tsy misy bibikely bibikely, tsy misy tasy, tsy misy tsimoka, tsy misy lo, tsy misy bobongolo, tsy misy hoditra manify poizina, vatana feno, loko mamirapiratra sy mamirapiratra, nofo mavo, fibre kely, tsiro mafana antonony, tsiro matsiro ho an'ny mahandro sakafo, manankarena sakafo ho an'ny fahasalaman'ny olombelona. Fiainana lava, mety hahatratra 2 taona mahery raha tehirizina tsara. Mari-pana mety: 12-13 diplaoma. Endri-javatra: 1.Ny volom-borona mitazona ny voany dia nambolena tao amin'ny toeram-piompiana, nambolena tsara ireo tantsaha, ny zavatra organika dia tsy misy fandotoana, mitandrina ...
Ny vidiny tsara indrindra amin'ny fanondranana sinoa tongolo mena vaovao volomparasy
Ny tongolontsika dia mahasalama tokoa izay misy fitambaran-tarehy voajanahary afaka mihetsika amin'ny vatan'olombelona mba hiteraka fahasalamana. Manondrana tongolo amin'ny habe sy naoty isan-karazany izahay. Mividy tongolo mivantana avy amin'ireo mpamboly malaza be izahay, izay ambolena ara-nofo nefa tsy mampiasa fanafody famonoana bibikely sy akora simika manimba. Ny tongolo-tsika dia vaovao sy madio ara-pahasalamana miaraka amina gony mba hiantohana fiainana lava. Ny tongolobe dia miavaka tsara amin'ny fampiasana naoty, habe, tsiro manankarena ary ...